Alaabada Shiinaha ee isku dubarideysa soo saaraha iyo qeybiye | Meesha
Alaabada Isu Imaanaya
Mestech waxay siisaa macaamiisha adeegyo alaab soo uruurineed oo ku saabsan alaabada elektaroonigga ah, qalabka korontada, amniga iyo alaabada dhijitaalka ah, oo ay ku jiraan qaybaha wax soo saarka, wax iibsiga, isu-soo-saarka badeecada dhammaatay, tijaabinta, baakadaha iyo rarka.
Iyadoo la siiyay qaybo balaastig ah, qaybo bir ah oo loogu talagalay macaamiisha, MESTECH sidoo kale waxay u fidisaa macaamiisha adeeg soo uruurin, oo aan lahayn warshad u gaar ah ama aan heli karin soo saare maxalli ah oo leh qiime tartan ama tiknoolajiyad tayo leh. Tani waa hal qayb oo ka mid ah adeeggayaga oo dhan.
Waa maxay isu soo saarka alaabta
Isku soo uruurintu waa habka isku xirida qaybaha la soo saaray oo ah qalab dhameystiran, mashiin, qaab dhismeed, ama unug mishiin ah .Waa talaabada muhiimka ah in la helo alaabooyin leh shaqooyin gaar ah.
Isku soo wada duub waa howsha ugu muhiimsan geedi socodka wax soo saarka oo dhan. Waxaa ka mid ah waxqabadyo taxane ah, sida tarjumaadda ulajeeddada naqshadeynta, qorshaynta geeddi-socodka, abaabulka soo-saarka, qaybinta qalabka, abaabulka shaqaalaha, isu-soo-saarka alaabta, tijaabinta iyo baakadaha. Ujeeddadu waa in la helo badeecooyin la kulmaya naqshadeeyaha horay loo qeexay, tayada iyo shuruudaha looga baahan yahay.
Isku soo uruurinta alaabtu waa shaqo injineernimo nidaam ah, oo ka kooban taxane ah maarayn urureed iyo hawlo farsamo, oo ay ka mid yihiin:
2. Biilasha diyaarinta maaddada
Iibsashada alaabta, keydinta
Habka Hawlgalka ee Heerka Sare
5. Xirfadaha howl wadeenka iyo tababarka
6.Baadhitaanka tayada iyo hubinta
7.Tilmaan iyo qalab joogto ah
8.Fitting and imtixaanka
Socodka alaabta isu geynta
Khadadka isku imaatinka alaabta ee Mestech
Alaabooyinka aan u ururinno macaamiisheenna
Telefoon wireless ah
MESTECH waxay u fidisay macaamiil badan dalal badan adeegyo isugu jira. Waxaan soo ururinay khibrad qani ku ah arimahan sanado badan. Waxaan si kal iyo laab ah kuugu siineynaa adeeg hal-joogsi ah oo ka imanaya nashqadeynta wax soo saarka, qeybsanaanta qaybaha ilaa shixnadda wax soo saarka la dhammeeyay. Kuwa baahiyo iyo su'aalo qaba fadlan noo sheeg xiriiriyaha soo socda.
Hore: ABS wax taaj oo kale duray ABS
Xiga: Naqshadeynta caaryada
Isku soo wada duub Golaha Badeecadaha
Golaha Qalabka Kombiyuutarka
Golaha Macaamiisha Elektaroniga
Golaha Alaabooyinka Qoyska
Shirka Golaha Qalabka Taleefoonka Gacanta
Guryaha qalabka korontada la isku duro
Double-duritaanka kiiska caag biyuhu of int ...
Sanduuqa wax lagu xajiyo ee la isku duro oo la isku duro